काठमाडौं । कम्युनिस्टहरू शक्तिशाली भएका बेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भने विभाजित भएका छन् ।
पौडेल, सिटौला र सिंहको समूहले काठमाडौंमा भेला समेत गरेका छन् । उनीहरूले भेलाबाट देउवाको उचितो काढेका थिए ।
सभापति देउवा समूहलाई त्याग गरेका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले कांग्रेसलाई समाप्त पार्ने योजनामा गिरोह सक्रिय रहेको प्रतिक्रिया दिए । यो खबर यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
सभापति देउवाले पनि कांग्रेसलाई सम्हाल्न सकिरहेका छैनन् । देउवाले विश्वास गरेका नेताहरू विमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरूले खुलेर बोलेका छैनन् । देउवाको निकट रहेका मीनबहादुर विश्वकर्मा, डा.प्रकाश शरण महतहरूका गतिविधि कांग्रेसको सिद्धान्त र योजना विपरित हुने गरेका छन् ।
यसरी कांग्रेसलाई फाइदा नपुग्ने देखिन्छ । देउवालाई केन्द्रमा विरोधीहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नै गृहजिल्ला डडेलधुरामा पनि विरोधको सामना गर्नुप-यो । देउवाविरुद्ध नारावाजी भएको छ । देउवाको गलत निर्णयले कांग्रेसलाई मात्रै होइन सिङ्गो देशलाई नै असर परेको छ ।
जसका कारण कम्युनिस्टहरू हाबी भएको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । यसको मूल्य देउवाले चुकाउनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
नेता सिटौला सभापति देउवाको एकल निर्णयले कांग्रेसको अस्तित्व नै धरापमा परेको भन्दै पौडेल समूहसँग मिलेर पार्टी बलियो बनाउने प्रयासमा लागेका छन् ।
अहिले कांग्रेसलाई एक बनाएर कम्युनिस्टविरुद्ध लड्ने क्षमतावान बनाउनुपर्ने दायित्व उनीमाथि आएको छ । केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले भने, ‘हामीले कांग्रेसलाई बचाउनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन कम्यनिस्टहरूसँग लड्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि छ ।’ सभापति देउवाका गलत निर्णयले नै कांग्रेसलाई घाटा भएको उनको बुझाइ छ ।
देउवाले खुमबहादुर खड्काकी पत्नी शिला गौतम खड्का र दिलबहादुर घर्ती जस्ता जनाधार नै नभएकालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेर विरोधी समूहलाई चिड्याउने काम गरेका छन् ।
तैपनि देउवाले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएका छैनन् । खड्काको निधनपछि त्यो समूहलाई जागाइ राख्न पूर्णबहादुर खड्का समूह सक्रिय छ । देउवाले त्यो गुटलाई मलजल दिइरहेका छन् ।
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ ३१, २०७५०८:०७
भक्तपुरमा बन्ने भनिएको रंगशाला भक्तपुरवासीले बन्न नदिने !
को हुन् दुई करोडमा सांसद बन्ने नरमायाँ को हुन् ? किन आइन् एकाएक चर्चामा
नेपालकै एक यस्तो ठाउँ जहाँ कहिल्यै विभेद हुन्न : सबै मिलेर एकैठाउँमा राख्छन् जमरा